« Mety ve ny mandoa hetra ho an’ny Fanjakana ? » - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Alahady Tsotra Faha 29A
Iz. 45, 1. 4-6 ; 1 Tes. 1, 1-5b ; Mt. 22, 15-21
Taorian’ny adihevitra nifanaovan’ny lohandohan’ny mpisorona sy ny loholona Jody tamin’i Jesoa, dia ny Farisianina sy ny Herodianina indray no mifanatrika aminy. Fanontaniana fandrika no napetrak’izy ireo tamin’i Jesoa dia ny amin’ny fandoavan-ketra ho an’ny fanjakana Romanina; mety ve sa tsia ?
Amim-pahakingana tokoa no andokafan’ny Farisianina an’i Jesoa ho « Mpampianatra », sy « marina », ary « mampianatra ny lalan’Andriamanitra araka ny marina » sady « tsy mizaha tavan’olona ». Ny mifanohitra amin’ireo rehetra ireo anefa no tena ao am-pon’izy ireo. Misy fihatsarambelatsihy ihany koa anefa ny fomba nentin’izy ireo nihaona tamin’i Jesoa: « Niaraka tamin’ny Herodianina ho any aminy izy ireo ». Hatramin’izay dia tsy nifankahazo ny Farisianina sy ny Herodianina – izany hoe ireo ankolafy mpanohana an-dry Heroda mpanjaka sady mankato ny fanjanahan-tany romanina tarihin’ny amperora Sezara – izao kosa dia indreo izy ireo fa miaraka sy miray tetika hamandrika an’i Jesoa... Rehefa misy tombontsoa iombonana mantsy dia afaka miaraka ihany na ireo tsy mitovy firehan-kevitra aza…
« Mety va ny mandoa hetra ho an’i Sezara sa tsia ? ». Fanontaniana fandrika izany satria raha hamaly « eny » i Jesoa dia ho ampangain’ny Farisianina ho momba ny Herodianina sy mankato ny fitondrana romanina. Raha hamaly « tsia » kosa Izy dia ho ampangain’ny Herodianina ho mpanohitra an’i Heroda mpanjaka sy mpikomy amin’ny fanjakana romanina. « Ry mpihatsaravelatsihy, nahoana ianareo no maka fanahy Ahy ? ». Tsaroana eto ny fakam-panahy nataon’ny demony tamin’i Jesoa tany an’efitra ny amin’ny voninahitra amam-panjakana sy ny fomba namalian’i Jesoa ny mpaka fanahy hoe: mialà amiko ry satana!
« Aloavy ho an’i Sezara izay an’i Sezara… ». Tsy ny hamaly « eny » na « tsia » avy hatrany no nataon’i Jesoa fa ny mitarika ireo mpanontany azy mba handinika sy hihaino ny feon’ny fieritreretana ary hitodika any amin’Andriamanitra Ray. Nasainy nodinihin’izy ireo ny « farantsa kely fandoa amin’ny hetra », hita eo ny sary sy ny anaran’i Sezara. Nasain’i Jesoa omena an’i Sezara tokoa izay azy. Raha nijanona teo anefa ny valin-tenin’i Jesoa dia ho nampangain’ny Farisianina ho mpamadika sy tsy tia tanindrazana Izy, ary ho anisan’ireo izay manaraka ny fomban’ny Herodianina ka manao an’i Sezara ho andriamanitra kely…
« Aloavy ho an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra ». Notarihin’i Jesoa indray àry izy ireo mba hanana fijery ara-pinoana fa tsy ny ara-nofo fotsiny ihany. Sezara sy ny volany dia tsinontsinona, mandalo sy miserana fotsiny eto amin’ity 2fiainana ity. Tahaka ireo mpanjaka sy mpitondra malaza nifandimby teo amin’ny tantara. Zavaboary sy fitaovan’Andriamanitra Ray ihany izy ireny. Malaza amin’ny vanimpotoana iray fa ho tantara sisa any aoriana any. Anisan’izany, ohatra, ry Sirosy, mpanjaka Persa (vakiteny voalohany), izay tsy nahalala ny Tompo Andriamanitr’Israely akory, kanefa nandavo sy nanongana ny fanjakana Babilonianina, ka zary lasa mpamonjy - mesia, voahosotry ny Tompo - ho an’i Israely. Tsy i Sirosy anefa no inona fa ny Tompo irery ihany : « …tsy misy na inona na inona afa-tsy Izaho ! Izaho no Tompo ary tsy misy hafa », hoy ny vakiteny voalohany.
Mbola fakam-panahy mahazo ny olona ankehitriny ihany koa ny adihevitra momba ny politika sy ny fivavahana. Ao ireo mandray ny fivavahana ho fitaovana hanohanana fotokevitra ara-politika, ao kosa ireo mandray ny politika ho hany lala-marina ka mitsipaka ny fivavahana. Ny evanjely kosa anefa dia manambara fa an’Andriamanitra Ray izao rehetra izao na dia eo aza ny adidy takin’ny fiarahamonina sy ny fanjakana.
« Omeo ny Tompo, ry fokom-pirenena rehetra, omeo Azy ny voninahitra sy ny fahefana ; eny omeo ny Tompo ny voninahitry ny anarany » (Sal. 96, 7-8).